Fandoavana divay tsy misy solontena avy amin'ny fizahan-tany na mpizahatany | Vaovao momba ny divay
Home » Vaovao momba ny divay » Ny haba amin'ny divay tsy misy solontena avy amin'ny fizahan-tany na mpizahatany
Ben Aneff amin'ny hetra divay
Ny tarif amin'ny divay dia napetraka tamin'ny fanafarana avy amin'ny firenena eropeana maromaro avy amin'ny filoha teo aloha Trump izay misy fiatraikany amin'ny faran'ny fizahan-tany sy ny indostria mifandraika amin'ny dia.
COVID-19 dia nanohitra ny tsirairay sy ny indostria rehetra; kanefa, ny trano fisakafoanana dia iharan'ny karavasy hatrany noho ny hetsiky ny governemanta.
Ny Distilled Spirits Council, vondrona indostrialy, dia sahiran-tsaina noho ny fahalianan'ny fitondrana Trump tamin'ny fametrahana tarif amin'ny divay.
Ny US Trade Trade Alliance dia nandrindra ny fiaraha-miasa amin'ny chef sy ny trano fisakafoanana mba hanerena ny fitondrana Biden handao ny fiheverana ny saran'ny fanampiny amin'ny fanafarana divay.
Ny hetra amin'ny vokatra tiantsika sy tadiavintsika dia tsy malaza velively. Raha ny momba ny fiakaran'ny vidin'ny divay noho ny hetra amin'ny divay dia mety hanjary malemy isika. Angamba ny indostrian'ny divay nampidirina dia nanjary lasibatra nandritra ny fitondrana farany satria ny namana nipetraka tao amin'ny White House dia nisafidy ny Coke noho ny divay mamirapiratra na Riesling; raha hafa ny safidiny zava-pisotro, dia mety hidina amin'ny indostrian'ny rano na zava-pisotro malefaka ny hetra.
Fifandirana eo amin'ny varotra
Ny Office of the US Trade Representative (USTR) dia nametraka tarif 25 isan-jato amin'ny ankamaroan'ny divay nafarana avy tany France, Alemana, Espana ary UK nanomboka ny volana oktobra 2019 ho valifaty noho ny fifanolanana fanampiana amin'ny fiaramanidina efa ela teo amin'ny Etazonia sy ny Vondron Eropeana. mahatafiditra an'i Boeing (Chicago) sy Airbus (Leiden, Netherlands). Ny fampiakarana ny vidiny amin'ny 25 isan-jato dia tombanana hampiakatra ny vidin'ny voaloboka divay any Etazonia 2.6 isan-jato eo ho eo, ary ny vidin'ny mpamokatra tavoahangy tavoahangy kosa dia 1.1 hatrany. isan-jato amin'ireo firenena kendrena. Ny tarif izao dia miasa.
Etazonia no mpanafatra divay frantsay lehibe indrindra ary ny governemanta amerikana notarihin'i Trump dia nanolotra satroka fanampiny 100 isan-jato amin'ny Champagne frantsay sy divay mamirapiratra hafa. Ny Filoha Trump dia mpankafy be ny vidim-piainana na dia hitan'ny mpahay toekarena aza izany fomba fandoavan-ketra izany ho enta-mavesatra ho an'ny mpanafatra izay ampitaina amin'ny mpanjifa amin'ny endrika vidiny avo lenta ao amin'ny fisoratana anarana. Soa ihany ho an'ireo mpankafy divay frantsay, tsy nampiharina io tarif io; na izany aza, ny tarif 25 isan-jato efa an'ny divay eropeana dia mety hampitomboina ary resahina any Washington ankehitriny.
Fiaramanidina vs. voaloboka
Ny Distilled Spirits Council, vondrona indostrialy, dia sahiran-tsaina noho ny fahalianan'ny governemanta Trump tamin'ny fametrahana tariff amin'ny divay, manontany ny maha-mety ny fitarihana ny indostrian'ny fandraisam-bahiny amin'ny fifanolanana ara-barotra tsy misy ifandraisany.
Mahaliana ny manamarika fa ny divay italianina sy mamirapiratra dia nesorina tsy ho ao anatin'ny lisitra malaza satria napetraka tamin'ireo divay mbola fonosina ao anaty kaontenera kely kokoa noho ny roa litatra ary misy alikaola alohan'ny 14 isan-jato. Raha nampidirina anaty kaontenera be na be ny divay ary nanana ABV avo kokoa… dia nanamarika FAMARANANA.
Tamin'ny taona 2020, ny United States Trade Representative (USTR) dia nanapa-kevitra ny hitodika any amin'ny indostrian'ny divay ary hamely azy io amin'ny sarany fanampiny. Fa maninona Niato ny fifandirana Airbus. Ny governemanta Trump dia tsy faly fotsiny nanimba ny firenena sasany sy ny divay sasany, ankehitriny dia te-hikapoka ny mpikambana rehetra ao amin'ny Vondrona eropeana izy ireo ary hitondra ny sokajy divay rehetra eo ambanin'ny elo (manadino ny haben'ny fonosana na ny alikaola misy alikaola).
Ireo mpisolovava amin'ny indostrian'ny divay dia tsy faly ary nijoro teo amin'ny barilan'ny divain'izy ireo, nanohitra ny tolo-kevitra fanerena ireo Trumpsters hiala amin'ny soso-kevitra. Na dia tsy ao amin'ny White House aza ireo mpisolovava an'i Trump ankehitriny, dia navelany teo amin'ny latabatra ny fandrahonana fanitarana ny sarany ary ny lalàna miandry dia manitatra ny tarif amin'ny divay eropeana rehetra miaraka amin'ny fahafaha-miverina amin'ny fangatahana 100 isan-jato.
Ny valiny amin'ny vidin'ny mpanjifa ambony
Inona no ataon'ny tarif? fisotroana divay? Ny fiampangana sarany 25 isan-jato fanampiny amin'ny divay eropeana amin'ny tsena saropady amin'ny vidiny ankehitriny dia mampihena ny fangatahana ary ireo firenena ao amin'ny lisitra Trump dia niaina 32% ny fidiram-bola. Amin'ny tranga sasany, ny mpamokatra vahiny dia nampihena ny vidiny ary nizara ny sasany tamin'ny fanaintainan'ny mpanjifa any Etazonia izay tompon'andraikitra amin'ny fandoavan-ketra amin'ny faran'ny andro. Ny vokatr'ity toetrandro divay politika ity? Ny divay avy any Frantsa, Alemana, Espana ary Angletera dia ambany kalitao kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa milaza fa nisy fiovana ny fifangaroan'ny vokatra mankany amin'ireo divay misy vidiny ambany kokoa mitazona ireo divay tsara kokoa sy lafo kokoa, ivelan'ny tsenan'i Etazonia.
COVID-19 dia nanohitra ny tsirairay sy ny indostria rehetra; na izany aza, famelezana goavana sy mahatsiravina no natao manokana tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany, miaraka amin'ireo trano fisakafoanana nokapohina hatrany am-piandohana / nijanona / mandeha / tsy nandehanan'ny governemanta.
Vokatry ny areti-mandringana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, nijanona ny indostrian'ny fizahantany. Noho ny fandrefesana ny halavirana ara-tsosialy sy ny fitandremana ankapobeny amin'ny toerana ampahibemaso, dia nihinana kely kokoa ny mpanjifa ary ny fihenan'ny fisakafoanana nipetraka tao Etazonia nandritra ny taona dia 64.68 isan-jato hatramin'ny 13 Janoary 2021 (statista.com). Amin'ny ankapobeny, ny fivarotana trano fisakafoanana sy fisakafoanana ara-tsakafo manontolo dia nidina $ 240 miliara avy amin'ny ambaratonga antenaina tamin'ny taona 2020 ary tafiditra ao anatin'izany ny tsy fahampian'ny varotra amin'ny toerana fisakafoanana sy fisotroana, miampy fihenan'ny fandaniana amin'ny fivezivezena amin'ny asa fanompoana amin'ny sehatry ny asa toy ny trano fandraisam-bahiny, zavakanto / fialamboly / fialamboly , fanabeazana, fitsaboana ary fivarotana (restaurant.org).
Ny indostrian'ny alikaola amerikana dia namoy asa saika 93,000 sy karama 3.8 miliara dolara. Rehefa tsy nahita antony nitomboan'ny aretin'ny COVID sy ny maty ny birao sy ny mpanao politika dia nanome tsiny ny fiparitahan'ny trano fisakafoanana sy fisotroana izy ireo. Raha tsy nisy ny fikarohana sy ny siansa hamaritana ny fahombiazana sy ny fahamarinan'ny fanamarihan'izy ireo, ny trano fisakafoanana sy ny fisotroana dia nafindra teo amin'ny laharana voalohany amin'ny lisitra AZA MIVARITRA, ka nandohalika ny indostria, hoy i Ben Aneff, filohan'ny US Trade Trade Alliance ary Tale mpitantana, Tribeca mpivarotra divay any New York.
Nisy fiantraikany tamin'ireo mpaninjara divay amerikana ny fanodinkodinana manohitra ny trano fisakafoanana sy fisotroana ka niteraka fatiantoka 50-60 isanjaton'ny varotra nataony. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny enta-mavesatra fanampiny amin'ny haba, dia hisy ny fotoana voafetra ho an'ny orinasa mpamokatra divay maro hiaina ao amin'ny tsenan'ny fifaninanana. Hitan'i Aneff fa ny fandrahonana nandrahona ho "fandrahonana lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny divay hatramin'ny fandrarana."
Aneff dia manantena fa ny governemanta Biden dia hijery ny fandaharan-tariff ankehitriny ary hivoaka hanohana ny indostrian'ny divay satria ireo orinasa voadona noho ny hetra dia tsy orinasa lehibe toa an'i Boeing miaraka amina tsena mitentina 120 miliara dolara fa manimba ireo mpamokatra divay any Frantsa sy Alemana.
Fikambanan'ny mpivarotra divay any Etazonia
Ny fiatrehana ny vidin'ny divay nafarana amin'ny ho avy WorldTourismNetwork.travel ZOOM miresaka amin'i Dr. Elinor Garely, eTN Investigating Reporter, dia i Ben Aneff, ny filohan'ny US Wine Trade Alliance (USWTA) ary ny Managing Partner an'ny Tribeca Wine Merchants any New York City. Talohan'ny nananganana ny fikambanana dia niditra an-tsehatra tamin'ny fanohanana ny National Association of Wine Retailers i Aneff, nitarika ny fifanakalozan-kevitra momba ny vidiny ary nijoro ho vavolom-belona momba ny vokatry ny vidiny teo alohan'ny Vaomieran'ny varotra iraisam-pirenena.
Aneff dia nanatrika ny Texas Tech University izay naha-lohany mozika azy (1999-2004) ary nahazo ny mari-pahaizana Master momba ny mozika avy amin'ny Ithaca College (2004-2006). Ny fifandraisany tamin'ny divay dia natomboka tany Berlin, Alemana, toerana naha Mpanolotsaina divay azy. Tamin'ny taona 2009 dia lasa talen'ny varotra tao amin'ny Tribeca Wine Merchants izy ary lasa Mpitantana mpiara-miasa amin'ny 2014.
Ny Alliance dia nandrindra ny fiaraha-miasan'ny chef sy ny trano fisakafoanana mba hanerena ny fitondrana Biden hiala amin'ny fiheverana ny saran'ny fanampiny amin'ny fanafarana divay. Ireo matihanina amin'ny sakafo sy zava-pisotro ary trano fisakafoanana dia namaly ny ezaka tamin'ny fandefasana taratasy 2000 mahery avy amin'ny fanjakana 50 mangataka ny fanesorana ny sara.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny vidin'ny divay, mifandraisa: USwinetradealliance.org